नेपालः पर्यटकका लागि पाठशाला | .:: Welcome || Paryatannews
Home » मुख्य समाचार » नेपालः पर्यटकका लागि पाठशाला
हिमालयन प्लानेट एड्भेन्चर्स प्रालि
नेपाल पर्यटनको दृष्टीले महत्वपूर्ण छ । यहाँका साँस्कृतिक, प्राकृतिक र भौगोलिक विविधताले विश्वभरका पर्यटकहरुलाई लोभ्याउँछ । तसर्थ, नेपालको सौन्दर्य हेर्नका लागि पर्यटकहरु नेपाल आउँछन् ।
नेपालको सबै ठाउँ पर्यटनका दृष्टिकोणले उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । नेपालको हावापानी अनुसार यहाँको पर्यटन विकास गर्न सकिन्छ । हिमाल, पहाड र तराई यी तीनै तहका जमिनमा एउटै सिजनमा पनि तापक्रम फरकफरक हुन्छ । तराईमा ३५ डिग्रि सेल्सियस हुँदा पहाडमा २० देखि २५ डिग्रि तापक्रम हुन्छ भने हिमाली भेगमा ९ देखि १२ डिग्रिको हुन्छ । यस्तो किसिमको हावापानी विश्वको कमै देशमा पाइन्छ ।
व्यवस्थित किसिमको सडक सञ्जालले उच्च हिमाली भेगलाई जोड्न सके आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटनको विकास गर्न सकिन्छ । विश्वमा ८ हजार मिटर भन्दा माथिका १४ वटा हिमचुचुरा मध्ये नेपालमा मात्रै ८ वटा छन् । ती हिमालहरुमा सगरमाथा, कन्चन्जंगा, ल्होत्से, मकालु, धौलागिरी, मनास्लु, चोयू र अन्नपूर्ण पर्दछन् । १९५३ मा तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र सर एड्मन हिलारीले विश्वको अग्लो हिम चुचुरो सगरमाथा चढेदेखि नेपालको नाम अझ विश्वमा परिचित हुन थाल्यो । तीनै अग्ला आठ हिमालमा कायम गरिएका विभिन्न खालका विश्वकीर्तिमानीले नेपाललाई हरेक वर्ष विश्वभर थप परिचित गराइरहेको छ ।
नेपालमा १९५१ सम्म एकतन्त्रीय राणा शासन नै थियो । त्यसताका नेपालको पर्यटन प्रबद्र्धन खासै हुन सकेन । जब राणा शासनको अन्त्य भयो, त्यसपछि भने विदेशी पर्यटकले नेपालको पर्वतारोहण गतिविधि जान्न थाले । अहिले विश्वभरबाट आउने पर्यटकका लागि नेपाल थिएटर भएको छ । नेपालमा भएका पर्वतारोहण गतिविधि, साँस्कृतिक विविधता, प्राकृतिक सौन्दर्यता र यहाँको परम्पराहरुले उनीहरुलाई लोभ्याइरहन्छ ।
प्राकृतिक सम्पदा र सँस्कृतिक हिसाबले नेपाल अझ पर्यटन क्षेत्रमा अगाडि छ । नेपालको वन्यजन्तु विदेशी पर्यकका लागि एउटा आकर्षण हो । जंगल सफारी, राफ्टिङ, क्योनोनिङ, बन्जिजम्प, रेडपान्डा र एक सिंहे गैंडाजस्ता दुर्लभ वन्यजन्तुको अवलोकन नेपालमा गर्न पाइन्छ ।
सँस्कृतिका हिसावले, विभिन्न जात, भाषाभाषी, मठमन्दिर नेपालको पर्यटनको अर्को आकर्षक गन्तव्य हो । नेपाली समाजमा हातबाट बनाइएका हस्तकलाको सामान, मूर्तिकला, थांका, माटाका सामान र काष्ठकलाले नेपालको पर्यटनमा एक आयाम थपेको छ । प्रत्यक्ष रुपमा हेर्नको लागि भक्तपुरमा माटोबाट बनाइएका सामान, पाटनमा मूर्ति तथा काठका सामानको अवलोकन गर्न सकिन्छ । जनकपूरको मिथिला आर्टस् त झनै दृश्यावलोकनको लागि ज्यादै महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
गाउँगाउँमा खोलिएका आआफ्नो सँस्कृतिमा आधारित होमस्टेले नेपालको सँस्कृति जान्न र बुझ्न विदेशी पर्यटकहरुका लागि यो एक गहकिलो पाठशाला हुनजान्छ ।
नेपालः पर्यटकका लागि पाठशाला Reviewed by Shiva Shrestha on Jul 16 . ऋषिराम पनेरु अध्यक्ष हिमालयन प्लानेट एड्भेन्चर्स प्रालि नेपाल पर्यटनको दृष्टीले महत्वपूर्ण छ । यहाँका साँस्कृतिक, प्राकृतिक र भौगोलिक विविधताले विश्वभरका पर्यटक ऋषिराम पनेरु अध्यक्ष हिमालयन प्लानेट एड्भेन्चर्स प्रालि नेपाल पर्यटनको दृष्टीले महत्वपूर्ण छ । यहाँका साँस्कृतिक, प्राकृतिक र भौगोलिक विविधताले विश्वभरका पर्यटक Rating: 0